သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဖြည့်စွက်စာ လိုအပ်သလား? | Ensure
သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဖြည့်စွက်စာ လိုအပ်သလား?
အစားအသောက် ကောင်းကောင်းစားခြင်းသည် စွမ်းအင်တိုးစေပြီး ရောဂါများကို ခုခံသည့်အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အား ကျန်းမာစေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အကုန် သိရှိပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျန်းမာစေရန် အကောင်းဆုံး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အားထုတ်မှုများ၊ သင့်တင့်သော အစားအသောက်များ စားသုံးပေးကြသော်လည်း အများစုမှာ နေ့စဉ်လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်များ မရရှိကြပေ။ အလုပ်ရှုပ်မှုများ၊ အသက်အရွယ်ရလာမှုများနှင့် လုံလုံလောက်လောက် မစားသုံးခြင်းတို့က ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါသည့် အာဟာရဓာတ်များ လုံလောက်စွာမရရှိစေသော အကြောင်းအရင်းများ ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာစေသည့် အစားအသောက်မျိုးစုံစားသုံးခြင်းသည် အာဟာရဓာတ်များ ပြည့်ဝနေစေမည့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အချို့သော လူများသည် သူတို့နေ့စဉ်စားသောက်နေသော အစားအသောက်များထဲမှ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များအား လုံလုံလောက်လောက် မရရှိနိုင်ကြပါ။ထို့ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆရာဝန်များက ဖြည့်စွက်စာများ ထည့်သွင်းစားသုံးကြရန် အကြံပေးညွှန်းဆိုတတ်ကြသည်။ အစားအသောက် ဖြည့်စွက်စာများသည် လူတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်များအား ပြည့်စုမျှတအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
မည်သည့်ဖြည့်စွက်စာမှ မစားသုံးခင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ရန်လိုအပ်သည်။ အချို့ဖြည့်စွက်စာများသည် သင်သောက်သုံးနေရသည့် ဆေးအာနိသင်များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်ဆရာဝန်မှ အခြားအာဟာရ ဖြည့်စွက်စာများ ညွှန်ကြားပါက ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသာ လိုက်နာသုံးစွဲပါ။
သက်ကြီးပိုင်းများသည် လူငယ်များထက် ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ထိုလိုအပ်သည့် အချို့မှာ
လူအများစုသည် လုံလောက်သည့်ဗီတာမင် D ဓာတ် အား တစ်ပတ်လျှင် ၂ ကြိမ် ၁၅ မိနစ်မှ ၃၀ မိနစ်အထိ နေရောင်ခြည်ခံ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ကြသည်။ သက်ကြီးပိုင်းများသည် အိမ်တွင်းနေထိုင်သည့်အချိန် များပြားသောကြောင့် ဗီတာမင် D ရရှိရန် ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် ဗီတာမင် D ပါဝင်သော နို့နှင့် စီရီရယ်၊ အဆီပါသောငါး၊ ဗီတာမင် D ပါသော ဖြည့်စွက်စာများအား နေ့စဉ်စားသုံးသော အစားအသောက်များနှင့်အတူ စားသုံးပေးလျှင် အကျိုးရှိပါမည်။
အဆိုပါ ဗီတာမင်သည် သွေးနီဥ ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို အာလူး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ကြက်ရင်အုံနှင့် အားဖြည့်စီရီရယ်များတွင် တွေ့ရှိရသည်။
အဆိုပါဗီတာမင်သည် သွေးနီဥနှင့် အာရုံကြောအား ကျန်းမာစေသည်။ သက်ကြီးပိုင်းများသည် အခြားသူများနည်းတူ ဗီတာမင် B12 လိုအပ်သော်လည်း အစားအသောက်မှ သဘာဝအတိုင်း ပုံမှန် စုပ်ယူမှုတွင် ပြဿနာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်များမှ အဆိုပါ ဗီတာမင်ရရှိရန်အတွက် ဖြည့်စွက်စာအား ထောက်ခံပေးကြသည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အရေးအကြီးဆုံး လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်မှာ ပရိုတင်းဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်နှင့်ဆိုင်သော ကြွက်သားဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် Sarcopenia အား ကာကွယ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ တိုးလာသော လိုအပ်ချက်များအားရောက်ရှိရန် နှင့် ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုအား ကာကွယ်ရန် လူအများစုသည် အစာတစ်နပ်လျှင် ပရိုတင်း ၃၀ ဂရမ်ထည့်သွင်းစားသုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။ မှန်ကန်သော ပရိုတင်းလိုအပ်ချက်များရရှိရန် သက်ကြီးရွယ်အိုများအနေနှင့် ပရိုတင်းကြွယ်ဝသည့် အစားအစာများဖြစ်သည့် ဂရိဒိန်ချဉ်၊ ပဲ၊ ချိစ့်၊ အစေ့အဆံအမျိုးမျိုးကို စားသုံးသင့်သည်။ ပိုသာသောပရိုတင်းနှင့် လိုအပ်သောအာဟာရ ရရှိရန် အစာစားချိန်တွင် Ensure Gold အား ထည့်သွင်းခြင်း၊ အဆာပြေသောက်သုံးပေးခြင်း၊ သင့်အကြိုက်မုန့်များအား Ensure Gold ဖြင့်ထည့်သွင်းပြုလုပ်ခြင်းများ လုပ်နိုင်ပါသည်။ အာဟာရဖြည့်စွက် သောက်စရာများသည် သင့်အားပရိုတင်းဓာတ်များစွာ ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည်။